CIN Khabar के, प्रदेश दुईमा सरकार परिवर्तन हुन्छ ?
के, प्रदेश दुईमा सरकार परिवर्तन हुन्छ ? प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्यो – उपेन्द्र यावद
केशव भुल बुधबार, भदौ २४, २०७७, ०४:१३:००
फोटो : यादवको फेसबुकबाट ।
काठमाडौं । तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी नेपाल मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेपनि पूर्ण रुपमा एकता भइसकेको छैन ।
पार्टी एकता भएसँगै प्रदेश नम्बर दुईमा सरकार परिवर्तनको बारेको बहस पनि चलिरहेको छ ।
यस विषयमा पार्टीमा पनि छलफल सुरु भएको हो ? साथी केशव भुलले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका एक जना केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यावदसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
प्रदेश नम्बर दुईको सरकार परिवर्तनको कुरा उठिराखेको छ, आधिकारीक कुरा के हो ?
त्यस विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन । र, अहिले पार्टीमा त्यो ऐजेन्डा पनि छैन ।
पार्टीका नेताहरूले त यो कुरा उठाइराखेका छन् नि, समय समयमा ।
हैन, अब कसै कसैले उठाउँदो होला कही कही, त्यो अलग कुरा हो । तर पार्टीमा यो विषयमा अहिले छलफलै भएको छैन ।
पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा पनि त्यो कुरा आएको छैन । छलफल भएको छैन ।
जहाँसम्म छ, दुई नम्बर प्रदेश सरकारको काम, अहिलेसम्म भएका गरेका कुराहरू, सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, के कति गर्न सके, कति गर्नुपथ्र्यो, सकेनन्, अब त्यसलाई आउँदा दिनमा बढि प्रभावकारी कसरी बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा पार्टीले व्यापक अध्ययन गरेर मात्र यस विषयमा छलफल हुन्छ ।
सरकार गठनको साढे दुई वर्ष भइसक्यो, अब समिक्षा गर्ने बेला भएन पार्टीमा पनि ?
त्यो समिक्षा हुन्छ अब । भर्खर त पार्टी एकिकरण भएको छ । एकिकरण र समायोजनका कार्यहरू सम्पन्न भएपछि यस विषयमा पार्टीमा छलफल हुन्छ ।
यसको मतलब, अहिले दुई नम्बर प्रदेश सरकारले जुन गतिमा काम गर्दैछ, जसरी गति लिइरहेको छ, त्यो ठिक छ भन्ने निष्कर्ष हो, यहाँहरूको ?
अब यो विषयमा मिलिजुली कुराहरु आइरहेको छ । कस्तो, कुन परिस्थितिमा कस्तो काम गर्न सक्यो, कति सकेन, त्यसको मुल्याङकन हुन बाँकी नै छ । अहिले कामबाट असन्तुष्टि र सन्तुष्टि देखाउने बेला भएको छैन । केन्द्रकै सरकार काम कस्तो छ र ? सबै ठाउँमा त संघीय सरकारकै असर पर्छ नि ।
प्रदेश सरकार सँग न आफ्नै कर्मचारी छ, न त आफनो स्रोतमाथि अधिकार छ । न कानुन छ, न प्रशासन छ न केहि छ । त्यस्तो अवस्थामा कुन प्रदेश सरकार कति प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने कुराको पनि त ख्याल राख्नुपर्छ ।
केन्द्रमा नउठे पनि प्रदेशमा त्यहाँको ससंद बैठकमा पनि कुरा उठिरहेकै छ नि ?
कुरा उठनु भनेको राम्रो हो नि । यो लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा कुरा उठाउन बोल्न पाउने गरी ल्याइएको हो त । हिजो तानाशाही व्यवस्था हुँदा पनि पञ्चायतमा कुरा उठ्थ्यो । कुरा उठनु भनेको राम्रो कुरा हो । त्यो नराम्रो कुरा होइन, तर के हो भन्दाखेरी कुरा मात्र उठेर उठनु भनेको समस्याको हल होइन ।
सबैतिर कुरा उठेपछि पार्टीले समिक्षा गर्नुपर्दैन, अहिलेम्म ?
समिक्षा त गर्छ होला नि पार्टीले अवश्य नै गर्छ ।
तपाइकै पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश दुईमा सरकार बनेकाले के कसरी सरकार चलिरहेको छ ? कत्तिको सहकार्य भइरहेको छ ?
निश्चित रुपमा भइहाल्छ नि । भइरहेको पनि छ । अहिले हामी पार्टी एकिकरणको प्रक्रियामै छौं । यो काम सकिएपछि कतै बन्दाबन्दी छ । कतै केही छ, अब यस्तो बेलामा बसेर राम्रोसँग छलफल हुन सकेको छैन । अब यो स्थितीको अन्त्य भएपछि हामी यस विषयमा प्रभावकारी कसरी बनाउने त, त्यस विषयमा छलफल गछौं । तर अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री हटाउने वा फेरबदल गर्ने कुनै पार्टीको योजना छैन ।
त्यसो भए अब प्रदेश दुई सरकारबारे कहिले हुन्छ, समिक्षा ?
सबै कुराको समिक्षा हुन्छ । समय आएपछि सबैको समिक्षा पार्टीले गर्छ र पार्टीले समिक्षा गरेर मात्र यो विषयमा निर्णय लिन्छ । अहिले चाँहि त्यस्तो कुनै मुद्दा उठेको छैन । कसै कसैले व्यक्तिगत रुपमा त्यस्तो कुरा उठाउँछन् होला ।
कसैलाई के मन लागेको होला कसैलाई केहि । त्यो अकै कुरा हो । अहिलेसम्म प्रयास गरि राखेका छन् । तर कमी कमजोरी होलान्, ति सबै कुराको बिषयमा समिक्षा गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टी अब लाग्छ ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश दुई सरकारको संघीय सरकारसँग खासै तालमेल मिलिरहेको छैन, किन हो ?
अहिले सबै प्रदेशको कुरा उस्तै त छ नि । संघीय सरकारबाट कुन प्रदेश सरकार पो खुसी छ र ? प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा सबै मुख्यमन्त्रीले कुरा उठाउनुभएको छ त
संघीय सरकारसँग प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीले पनि कुरा उठाइरहेकै छन् । प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग सन्तुष्ट हुने कुनै ठाउँ नै छैन ।
प्रदेश दुईमा मधेशी भनेर केन्द्रीत गरेको हो भने बेग्लै कुरा हो । सबै प्रदेश संघीय सरकारसँग असन्तुष्ट नै छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्ने, उसको आफ्नो कर्मचारी छैन, सबै संघीय सरकारबाटै नियन्त्रीत छ ।
भएका कर्मचारीलाई त्यहाँ सहयोग गर भनेर पठाउँछ । प्रहरी प्रशासन प्रदेशको छैन । प्रदेशको आफ्नै स्रोत छैन, न त कानुन नै छ ।
संघीय सरकारले बनाएको कानुन अनुसार हुनेछ भनेर हरेक कानुन बाँधिएको छ । यस्तो अवस्थामा हात खुटा बाँधेर स्रोत विहिन बनाएर प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन भन्नु गलत होइन त ? अनि कसरी काम गर्छन् प्रदेश सरकारले ? यसैमा प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेनन् । समन्वय गरेरनन् भनेर भन्न मिल्दैन नि ।
संघीय संसदमा तपाइको पार्टी पनि छ, तपाइजस्तो शिर्ष नेता हुनुहुन्छ, किन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न नसक्नुभएको हो ?
हामीले पटक–पटक संसद बैठकदेखि लिएर धेरै ठाउँमा प्रश्न उठाएकै त छौं नि । होइन र ? सबै प्रदेशको गुनासो छ । तर अरु प्रदेशमा रहेका सरकार केन्द्रमा रहेका सरकार एउटै पार्टी हुनाले उनीहरुका आवाज दबिएका हुन् ।
असन्तुष्टि र व्यापक आक्रोश त छंदै छ नि । त्यसकारण संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्रशासनको हस्तान्तरण गर्ने, आर्थिक स्रोतको हस्तान्तरण गर्ने, कानुन बनाउने र प्रहरी प्रशासन हस्तान्तरण लगायतका काम नगरिकन प्रदेश सरकारले कसरी काम देखाउँछन् ?
एउटा कार्यालय सहायक त आफ्नो छैन, खरिदार त आफ्नो छैन, एउटा सचिव त आफ्नो छैन, अनि उसले काम गर्ने संयन्त्र चाँही के ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २४, २०७७, ०४:१३:००
परिमार्जन नगरी एमसीसी पारित भए माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने (अडियोसहित)